Ny akanjo maitso maitso dia ny cocktail ary mandritra ny andro, lava amin'ny tany ary fohy, tranga iray sy mofomamy iray
Ny lokon'ireo ahi-maitso ao amin'ny akanjo dia mahavariana mandrakariva ary manome fitenenana ho an'ilay sary. Raha mifidy akanjo maitso, azonao antoka fa tsy ho azo atao izany, dia heverina ho izao tontolo izao io feo io. Ny haben'ny loko dia ahitana farihy maro: avy amin'ny mamiratra hatramin'ny dimby, ny tsirairay amin'izy ireo dia afaka mamorona fomba vaovao amin'ny sary.
Green Dresses 2017
Ny lokon'ny emeralda dia nahazo laza malaza amin'ny takariva sy ny akanjo isan'andro, izay hitan-dandy. Ny hevi-dehibe dia ny fandinihan-dry zareo manokana ary tsy mitaky fitaovana betsaka. Ny akanjo volom-bolo maitso 2017 dia aseho amin'ny endriny rehetra sy ireo karazan-javatra izay tsy handao ny fashionista rehetra:
Misy modely maotina sy malefaka, toy ny ohatra azontsika mitanisa vokatra iray miaraka amin'ny rambony misokatra , ny vehivavy dia mendri-piderana ary manetry tena amin'ny safidy iray;
Ny kilasim-bolo dia taratra monophonic, fa ny lahatsoratra amin'ny tànana broderie, ny fononteny ivelany sy ny floral ary ny fampiharana dia nahazo nalaza ihany koa;
Ny akanjo maitso dia mety ho tsotra araka izay tratra na misy drafitra, flounces ary ruches;
Raha ny fandefasana birao dia tranga tsy azo ovaina;
mba hanomezana ny vehivavy ho an'ny vehivavy amin'ny akanjom-bolo efa voafolaka;
Ny akanjo "akanjo" dia tena mety ary hanampy hanitsy ny tsy fahatanterahan'ilay sary;
Amin'ny lamaody dia hisy safidy hariva izay misy fandeferana, mangarahara, maharitra, misy lamasinina.
Trendy Green Dresses 2017
Akanjo maitso maitso 2017
Akanjo maitso ho an'ny andro tsirairay
Rehefa misaintsaina ilay sary mirindra, ny tovovavy iray amin'ny akanjo maitso dia afaka mifanaraka tanteraka amin'ny endriny, ny halavany ary ny fomba. Amin'izany fotoana izany ihany koa, manolo-kevitra ny hanao safidy amin'ny fanamarihana ny endriky ny fisehoana, ny lokon'ny volo sy ny karazana hoditra:
Ho an'ny ankizivavy maizim-be, misy poti-emeralda na aloky ny fatrana dia tonga lafatra;
Raha manana hoditra lolo mena ny tovovavy, tsara kokoa ny mifidy hazavana na akaiky ny loko sikla;
Ny akanjo isanandro dia asaina misafidy ny vokatra amin'ny lavany midi na ambonin 'ny lohalika miaraka amin' ny famenoana tsotra sy avo;
Toy ny fitafiana ho an'ny andro tsirairay dia mifanandrify tsara amin'ny akanjo maitso-akanjo na miaraka amin'ny akanjom-bolo kely misesisesy. Tena tsara ny fomba fanao amin'ny fofona na ny lobaka manify, mifatotra eo amin'ny bokotra;
Ny modely dia azo ampiana amin'ny antsipiriany mahaliana - paix, vato na embroidery.
Ho an'ny hetsika fombafomba na fitsangatsanganana ao amin'ny birao, ny akanjo lava loko maitso dia tonga lafatra. Azonao atao ny manandrana ny safidy amin'ny fomba samihafa:
Ny safidy nentim-paharazana dia ny vokatra tsy misy akanjo sy kofehy. Misaotra ny fisehoana mivelatra tsara, mifanaraka tsara amin'ny endriny, ny halavan'ny lohalika dia azo ekena ao. Ny zavatra iray azo atao amin'ny fisakafoanana dia mety ho lasa birao iray, dia tsara kokoa ny mamela ny alokaloka mamirapiratra ary manome lanja kokoa ny tony sy ny tsirony kokoa;
Raha mifidy akanjo maitso ho an'ny sarin'ny sarintany ianao, dia azonao atao ny miala amin'ny lamosina miaraka amin'ny soroka na bakteria misokatra. Amin'ny lohataona, ny alokaloka mamiratra dia hijery tsara, ny ahitra dia mitoetra hatrany amin'ny tendrony malaza;
Modely amin'ny lamosina na lamosina misokosoko dia tsy miangatra amin'ny alin'ny takariva amin'ny loko toy izany: malachite, jade ary emeralda;
Ny safidy amin'ny fehezan-teny iray dia tsy mitsahatra ny mijery ny fironana;
tena sy lamaody miaraka amin'ny akanjo. Ity singa ity dia hafa koa, satria mety ho variana ny halavany, azo atao ny manandrana ny sakany;
Ny antsipiriany mahaliana, toy ny baskety iray dia manitsy ny tsipiky ny kibo sy ny feny, miaraka amin'ny fanampiany azonao afenina ny fisalasalana eo amin'ny sary.
Akanjo fotsy maitso
Ny fomba "akanjo" dia afaka manome ny sary mampiavaka iray manokana, indrindra fa ny tena tompon'ny endri-tarehy tsara tarehy, dia mameno tsara ny vehivavy izy io ary mihamafana kokoa. Ny akanjo miloko maitso amin'ny endriny mitovy no mamaritra ireto antsipirihany miavaka ireto:
Misy karazany roa ny modely: ho an'ny iray amin'izy ireo ny fisian'antsam-batana na ny bokotra, ny singa toy izany dia tsy manana sehatra azo ampiharina, fa fehezam-boninkazo ihany koa. Ny safidy faharoa dia vokatra iray amin'ny fofona;
Ny zavatra, mifatotra amin'ny bokotra, dia azo ampitaina amin'ny fehikibo tsara tarehy;
dia asehon'ny elany hafa, mini, midi na maxi;
Raha misy vehivavy manana endrika tsy tanteraka, dia hanafina ny fahadisoana ny modely "akanjo", mety izany noho ny fisian'ny singa toy ny fofona.
Dress Green evening
Ny loko misy ny maitso dia manome ny tanora sy ny fahamendrehana eo amin'ny sary, tahaka ny mahazatra amin'ny fetibe. Ny vokatra amin'ity alokaloka ity dia mifanaraka amin'ny loko rehetra sy ny karazana hoditra. Ny akanjo maitso maitso dia manamarika ny antsipirihany toy izany:
Azo ampiasaina ho toy ny lamba mangarahara, ary henjana loatra;
Ny safidy be mpitia indrindra dia mbola miteraka vokatra miaraka amin'ny rindrina misokatra, izay matetika ampiana amin'ny lamasinina;
Ny tena marina dia akanjo volom-bolo maitso miaraka amin'ny soroka misokatra sy kavina mamirapiratra, ity modely ity dia hahita mahavariana amin'ny alokaloka;
Rehefa mifidy, aza adino ny karazana loko manga, satria ny ankamaroan'ny tononkalo dia noforonina ho an'ny tsipika hariva tsy misy sakantsakana. Ho an'ny loko maizina, ny silk dia tonga lafatra, izay mamorona loko marevaka, ary amin'ny loko maivana dia tsara kokoa ny mampiasa ny kodiarana na ny knitwear ;
Lasa manerana izao tontolo izao ny chiffon, mitovy amin'ny loko rehetra izany;
Ny lanjany dia manana anjara asa manan-danja, azonao atao ny mijanona amin'ny vokatra fohy mba hanamafisana ny fahatakarana ny tsipika na mifidy endrika lava sy mifanentana tsara.
Akanjo maitso eny amin'ny tany
Ho an'ny fizaran-taona maromaro isan-karazany, ny akanjo lava maitso lava dia heverina ho iray amin'ireo safidy fitafy indrindra amin'ny vehivavy. Rehefa misafidy izany dia tsy ilaina ny manao tsirambina ny sehatra, ny lamaody sy ny aloky, fa ilaina ny mandinika fotoana vitsivitsy:
Ny blondes dia aleon'ny loko maivana, ary ho an'ny brunettes - tonony maizina na emeralda;
Heverina fa ny loko volom-borona no tena mety indrindra ho an'ny vokatra toy izany, ka ny tompony dia tsy tokony hanahy ny vokatra ateraky ny akanjo;
Ny tsindrimandry tsy hay lazaina dia hamolavola akanjo lava lava lava eny amin'ny ety amin'ny chiffon na seza;
Tsy afaka manisy sofina na ampitomboina amin'ny andaniny lavalava: avy amin'ny soroka fohy eo amin'ny soroka ka hatramin'ny farany.
Ny singa Lacy dia manintona tokoa ny organika sy ny vehivavy, ny akanjo maitso miaraka amin'ny dantelina dia tsy miavaka amin'io lafiny io. Ny akanjo toy izany dia hahatonga vehivavy iray mahavariana. Rehefa misafidy ireto soso-kevitra manaraka ireto:
Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny laces dia napetraka eo amin'ny fantsom-pokonolona, ​​mazava kokoa na maizina kokoa, tsy maintsy raisina an-tsoratra izany. Raha tsara tarehy ilay tovovavy, dia mifidy loko malefaka izy, ho an'ny ankizivavy feno, tsara kokoa ny firaisana ara-maizina, izay manampy fanampiny fahalemena.
Ny vehivavy tsy misy endrika tsara dia tsy tokony ho entina miaraka amin'ny dantelina amin'ny halavany manontolo, mila mifidy silhouette eo akaiky izy ireo.
Ny akanjo maitso maitso amin'ny endrika silhoueta A dia mety tsara amin'ny akanjo isan'andro, raha tsy loko loatra ny loko. Ny modely eo amin'ny gorodona dia safidy fialan-tsasatra mahafinaritra ho an'ny hetsika manetriketrika.
Akanjo maitso miaraka amin'ny miverina
Ny fisian'ny ririnina misokatra dia manome ny sary ho fitsiriritana. Jereo tsara tsara ny akanjo lava maitso maitso. Azo aseho amin'ny fiovàna toy izany:
Azo jerena miaraka amin'ny loko mamirapiratra ny sary;
Mety misy ny fanampiana amin'ny endriky ny kisary.
Mijery tsara tarehy manopy maitso, vita amin'ny totozy cocktail. Misy karazany toy izany izy io:
ho toy ny akanjo tsara tarehy tsara tarehy, tapa-doko, mameno ny dantelina, ny chiffon manidina, mikoriana seza;
Azo atao ny mifangaro amin'ny vatosoa, azo ampiasaina amin'ny firaketana mangarahara na dantelina ny fitaovana maotina;
Amin'ny endriny amin'ny endriny dia azonao ampiasaina ny teboka boribory na lamandy;
Ny halavany dia mety ho hafa tanteraka, avy amin'ny frank mini ka hatramin'ny farany lavitra.
Amin'ny inona no manao akanjo maitso?
Mpilalao maro avy amin'ny firaisana ara-drariny no manontany tena ny amin'ny zavatra hafa ny akanjo, akanjo, kiraro, ny akanjo maitso maitso? Ny fitsipika fototra tsy maintsy tandremana dia ny mifidy zavatra mifanaraka amin'ity aloka ity:
Karazana loko toy izany, izay mety ho maivana kokoa na maivana kokoa;
safidy nandresy iray izay handinihana be diary - loko beige;
ny felam-boninkazo rehetra, ny hazavana ho maizina indrindra, dia hifanaraka;
loko mainty manerantany, izay hameno tsara ny aloky ny ahi-maitso;
Misy tsipika tena mahomby afaka mamorona raha mameno azy amin'ny akanjo sy ny akanjo marevaka mena.
Sarin'ny lamaody amin'ny akanjo maitso
Ny akanjo maitso toy ny fototry ny tsipìka mahafinaritra
Inona no kiraro mifanaraka amin'ny akanjo maitso?
Mba hamoronana sary manintona, dia toy izao ny kiraro amin'ny akanjo maitso maitso:
Ny dikan-teny tsotra eo amin'ny fehiloha avo na eo amin'ny valala dia tsy misy;
Ho an'ny akanjo isanandro, sambo, bala, palma tsara tarehy izay hahatsapan'ny vehivavy fa matoky izy;
Raha ny gamut maitso, ny loko volamena na volafotsy, mainty, beige, mavo, kodiarana mena dia tsara;
Ny vokatra izay manana lavaka ao amin'ny tany dia tokony ampitomboina amin'ny kiraro eny amin'ny voditongotra, sehatra na kofehy, ny mini-na midi zavatra dia avela amin'ny haingam-pandeha.
Kiraro ho an'ny akanjo maitso
Amin'ny fikarakarana manokana, tokony hifidy fitaovana amin'ny akanjo maitso ianao:
Ny endriky ny tarehy dia mijery tsara, mifanitsy amin'ny loko na samihafa feo;
ao amin'ny fomba fironana, raha eo anelanelan'ny akanjo sy ny Accessories dia misy lalao loko. Ho an'ny mpanankarena maitso maitso dia ilaina ny mifidy ny firavaka volamena sy volafotsy;
Ho an'ny vokatra misy ambony dia afaka misafidy ny safidinao amin'ny firavaka masiaka, ary amin'ny fisakanana dia tsara kokoa ny misafidy ny akanjo laconic;
Ny manga sy mainty mainty dia mifamatotra amin'ny emeralda, io safidy io dia azo atao amin'ny firavaka;
Ny akanjo vita amin'ny mena dia hamoaka ny sary manafaka sy ny firaisana.
Ny akanjo lava ny vehivavy
Ny fitongilan'ny vehivavy
Ny sweatshirts amin'ny vehivavy - ireo modely lamaody indrindra
Ny jiron'ny vehivavy ho an'ny fahavaratra
Akanjo Pritalennoe - ririnina modely, demi-sezon sy sary miaraka amin'izy ireo
Akanjo hoditra hoditra vita amin'ny hoditra
Ny akanjon'ny lehilahy
Fitafy kiraro - akanjo tsara sy mahazatra ho an'ny ankizivavy sy ny vehivavy
Salate cucumber miaraka amin'ny voan-tsinapy ho an'ny ririnina - tsy mahazatra loatra ny fikarakarana sakafo mahasalama
Ara-dalàna raha mifanena amin'ny tompony? Ireo alika 10 dia mahafantatra ny valin'io fanontaniana io!
Ahoana ny fisafidianana toeram-pivarotana entona?
Ny diky dia toy ny mpanafana
Mofomamy ny sôkôla amin'ny sôkôla sôkôla - fomba fitsangatsanganana ho an'ny fofona manitra sy tsara tarehy
Lamina ho shellac
Clicks amin'ny Girls German Shepherd
Ireo lamaody amin'ny kirany - hevitra tsara indrindra ho an'ny volo fohy, lava sy midina
Ny reniranon'i Namur
Firavaka vehivavy amin'ny sintepon
Fiompiana Aquarium - fikojakojana sy fikarakarana
Ny vaovao farany avy amin'ny fiainan'i Ben Affleck sy Jennifer Garner
Ambasady Frantsa any Belarosia